HomeWararka Maanta SomaliskaCaruurta Waalidkooda ayaa waydiineynaa si aan dib ugu soo Celino Wadanka
October 4, 2020 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 0
Sweden ayaa si firfircoon uga shaqeyneysaa sidii caruurta Iswiidhish-ka ah looga keeni lahaa xeryaha IS ee Syria.
Sweden ayaa hada wafdi u direysa Siiriya si ay ula kulmaan qoysaska iswiidhishka IS, sida Expressen uu ogaaday.
– Ujeedada safarka oo dhan ayaa ah in aan la kulmo haweenka iswiidhishka ah ee ku jira xeryaha oo aan weydiiyo haddii ay oggol yihiin in laga qaado carruurtooda si keligood dib ugu laabtaan Iswiidhan, ayaa lagu yidhi wargayska Expressen.
Wafdiga aadaya Siiriya inta badan waxay ka socdaan Wasaarada Arimaha Dibada , sida ku cad macluumaadka Expressen. Safarku wuxuu dhacayaa isagoo lala tashanayo maamulada maxalliga ah ee aagga ay Kurdiyiintu ka taliyaan ee waqooyi-bari Suuriya.
Tani waa markii labaad mudo sanad gudaheed ah oo Sweden ay wefdi u dirto goobtasi. Markii ugu dambeysay, wakiilo ka socda dowladda Kurdiyiinta maxalliga ah ayaa lalakulmay.
Safarkaas waxaa hogaaminayey safiirka wasaarada arimaha dibada Per Örneus, ergeyga gaarka ah ee Sweden ee xasaradaha Syria.
Natiijadu waxay markaas noqotay in toddobo carruur ah oo waalidkooda dhintay lasoo qaado dibna ugu soo laabteen Sweden.